Fokontany Manarintsoa : Jeren’ny polisy fotsiny ireo mpanendaka -
AccueilSongandinaFokontany Manarintsoa : Jeren’ny polisy fotsiny ireo mpanendaka
Isan’ny fokontany be mpanendaka iny faritra Manarintsoa, Andavamamba sy ny manodidina iny, hatreny Antetezana afovoany isanandro. Araka ny angom-baovao teny an-toerana izao dia mirongo zava-maranitra mihitsy ireo mpanendaka rehefa hanao ny asa ratsiny. Eny amin’ny faritra Antetezana Afoavoany voalohany ihany koa dia lasa toerana filalaovan’ny mpanendaka mihitsy, izay efa hatramin’izay ka hatramin’izao. Ny mahazendana anefa dia tsy misy azo atao fa jerem-potsiny izany asa fanendahana an-kalamanjana izany. Efa tsy matahotra tsy matahotra mpitandro filaminana intsony, izay voalaza fa tsy misy fisamborana ataon’ny polisy eny amin’ny manodidina na misy polisy aza, ka manao izay danin’ny kibony. Io no nambaran’ireo olona monina eny an-toerana, mahatsikaritra ny fanendahana miaro herisetra mihatra amin’ireo mpandalo eo anoloan’ireo mpitandro filaminana, mandrindra ny fifamoivoizana.
Ao anaty fitohanan’ny fiara, sy vao maraina ary rehefa hariva mipaika ny amin’ny 5 ora dia efa mafapana eny an-toerana. Tsy latsaky ny dimy izy ireo no miaraka raha ny fanambaran’ny nanatri-maso ary any anaty elakelan-trano maro no isitrihan’ireo andiana tovolahy mirongo zava-maranitra rehefa avy manendaka ny olona sendra azy. Raha ny fitantaran’ny olona hatrany, olona vahiny no tena kendren’izy ireo, izay matetika olona tsy mponina eny an-toerana ireo manendaka eny. Raha ny angom-baovao teny an-toerana izao dia eo imason’ireo polisy mpandamina ny fifamoivoizana izy ireo no manao ny fandravana saingy tsy misy misambotra ary tsy matahotra mihitsy aza. Satria tokoa ve mpandamina ny fifamoivoizana ireo polisy ireo, ka tsy manana fahafahana handray fepetra raha toa ka mahatsikaritra ny mpanendaka, izay mandalo eo imasony.
Nanamafy ny sefo fokontany antsoina Ramiandrisoa Bernard, izay miadidy ity faritra ity fa efa faritra be mpanendaka eny an-toerana. Ny atidoha amin’ity asa ratsy ity matetika avy eny an-toerana ihany fa kosa mitondra ny namany izy ireo, izay avy any Andranomanalina, Anatihazo, sy Ambodin’Isotry izy ireo. Efa arahin’izy ireo avy lavitra ireo olona ireo ary rehefa tafiditra ny elakelan-trano no raikitra ny fanedahana tambabe arahina fampihorohoroana amin’ny alalan’ny antsy. Mikaikaika ny olona amin’ny zava-misy amin’izao fotoana ary miantso ny manam-pahefana hijery akaiky ny zava-misy. Misy ihany mantsy hoy izy ireo ny fisafoana ataon’ny polisy avy eo amin’ny boriborintany fahaefatra, aorian’ny tatitra alefan’ny fokontany, saingy efa tsy tratra intsony ireo olon-dratsy. Tsy mbola nahitana vahaolana kosa hatreto, ity resaka fanendahana isam-pokontany ity raha ny eto andrenivohitra, na dia manao ny asa fisamborana tsy mitsahatra aza ny polisy. Na dia izany aza, tokony ho jeren’ny eo anivon’ny fitsarana akaiky ihany ny fanasaziana sahaza ireny olona ireny, fa raha mbola ny sazy telo volana izay efa mahazatra ihany dia tsy ahasakana ireo mpanao ratsy, hoy ihany ny fanazavana.
Tapitra nosavaina avokoa ny trano fonenana sy ny birao fiasan’i Mbola Rajaonah omaly nanomboka tamin’ny 6h maraina. Ambohimahitsy, Ambolonkandrina, Antsahabe ary Ambanidia… Mazava ny tanjona amin’izao zava-manjo an’i Mbola Rajaonah izao. Atao mihitsy izay hamotehana ...Tohiny